ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ - ဝီကီပီးဒီးယား
၂ ဇွန် ၂၀၁၀ (၂၀၁၀-၀၆-၀၂)
၁၂ / ၂၂၄
၃၀ / ၄၄၀
၇၁ / ၈၆၀
၂ / ၂၉
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ (ခ) USDPပါတီ)သည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အင်အားကြီး နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Union Solidarity and Development Party - USDPဟု လူသိများသည်။ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းအား အမည်နာမ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းထားသော ပါတီဖြစ်သည်။ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီသည် လက်ရှိအတိုက်အခံ ပါတီ ဖြစ်သည်။ ပါတီ၏ နိုင်ငံရေး သဘောတရား(political ideology)မှာ ကွန်ဆာဗေးတစ် ဝါဒနှင့် အမျိုးသား​ရေးဝါဒ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်မှာ အလယ်-လက်ယာ ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးသန်းဌေးက ပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူ ဦးဆောင်သည်။
တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက် နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ မှ ဖွဲ့စည်းထားခဲ့သောအသင်းကြီးဖြစ်ပြီး ယခုအခါတွင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇွန် ၂ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ထံတွင် ပါတီမှတ်ပုံတင်ကာ သီးခြားရပ်တည်နေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မြန်မာပြည်တဝှမ်း ၈၈၂ နေရာ အနိုင်ရခဲ့သည်။USDP ပါတီမှ ဦးသိန်းစိန်ကို လွှတ်တော်က သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၁ ကတည်းက ၎င်းတို့ အစိုးရသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများကို ကျယ်ပြန့်စွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းရော ပြည်ပပါ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များကို လိုလားခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၄၃ နေရာ၌ NLD နှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါများတွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်NLD က USDP ကို အနိုင်ရပြီး အာဏာရလာသည်။၂၀၁၈ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် သုံးနေရာ၌ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
၅ လက်ရှိပါတီ ဖွဲ့စည်းပုံ
၁၂၉ / ၂၂၄
— — ၁၂၉ အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင် ဦးသိန်းစိန်
၁၂၄ / ၂၂၄
— — ၅ အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင် ဦးသိန်းစိန်
— — ၁၁၂ အတိုက်အခံပါတီ ဦးသိန်းစိန်
၇ / ၂၂၄
— — ၄ အတိုက်အခံပါတီ ဦးသန်းဌေး
၂၅၉ / ၄၄၀
၁၁,၈၅၈,၁၂၅ ၅၆.၇၆% ၂၅၉ အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင် ဦးသိန်းစိန်
၂၂၂ / ၄၄၀
— — ၃၇ အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင် ဦးသိန်းစိန်
၂၉ / ၄၄၀
၆,၃၄၁,၉၂၀ ၂၈.၃% ၁၈၃ အတိုက်အခံပါတီ ဦးသိန်းစိန်
၂၆ / ၄၄၀
၃ အတိုက်အခံပါတီ ဦးသန်းဌေး
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ပါတီလာလျှောက်စဉ်က ပါတီခေါင်းဆောင်မှာ ဦးသိန်းစိန်ဟု ဖော်ပြထားပြီး ဒုတိယ ခေါင်းဆောင်မှာ ဦးဋ္ဌေးဦးဟု ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
၂၀၁၅ ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက်ညတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဌာနချုပ်တွင် ရှုပ်ထွေးမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ယာယီပါတီဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူထားသူ သူရ ဦးရွှေမန်းနှင့် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်သိန်း တို့မှာ ပါတီတွင် တာဝန်ယူထားသည့် ရာထူး အသီးသီးမှ ဖယ်ရှားခံခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။
ယင်းနောက် ပါတီဥက္ကဋ္ဌမှာ ဦးဋ္ဌေးဦး ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးမှာလည်း ဦးတင်နိုင်သိန်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယင်းအခြေအနေများကို ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီက ဩဂုတ်လ ၂၂ ရက်တွင် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဦးရွှေမန်းသည် ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်အဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေမည်ဟု အဆိုပါနေ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်ပါတီညီလာခံမှာ ဥက္ကဋ္ဌနေရာကို အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိန်နေရာမှာ ဦးသန်းဌေးကို ပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ ဦးသန်းဌေးဟာ ယခင် တပ်မတော်မှာ ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှာ ဒုဝန်ကြီး နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူလည်း ဖြစ်သည်။
ဦးသိန်းစိန် ၈ ဇွန် ၂၀၁၀ - ၂ မေ ၂၀၁၁
သူရ ဦးရွှေမန်း (ယာယီပါတီဥက္ကဋ္ဌ) ၂ မေ ၂၀၁၁ - ၁၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂
ဦးသိန်းစိန် ၁၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ - ၁ မေလ ၂၀၁၃
သူရ ဦးရွှေမန်း (ယာယီပါတီဥက္ကဋ္ဌ) ၁ မေလ ၂၀၁၃ - ၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၁၅
ဦးဋ္ဌေးဦး ၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၁၅ - ၂၃ ဩဂုတ်လ ၂၀၁၆
ဦးသန်းဌေး ၂၃ ဩဂုတ်လ ၂၀၁၆ - လက်ရှိ
(က) အမျိုးသားရေး မူဝါဒ။ ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးကို ထာဝစဉ် ဦးထိပ်ထားမည်။
( ခ) နိုင်ငံရေး မူဝါဒ။ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ဦးထိပ်ထား၍ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးမည်။
( ဂ) စီပွားရေး မူဝါဒ။ ဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးမည်။
(ဃ) နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ။ လွတ်လပ်၍ တက်ကြွသော နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒကို ကျင့်သုံးမည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး မူကြီး (၅)ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်မည်။
( င) ကာကွယ်ရေး မူဝါဒ။ နိုင်ငံတော်အား ပြည်တွင်းပြည်ပ အန္တရာယ်များမှ အပြည့်အဝ ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိအောင် ကြိုးပမ်း ဆောင် ရွက်သွားမည်။
( စ) လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ။ အခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံသားတိုင်း၏ အခွင့်အရေးနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို အာမခံမည်။
(ဆ) တိုင်းရင်းသားရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ။ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို အလေးထားမည်။ အခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ တိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အရေးများကို အပြည့်အဝ ရရှိခံစားနိုင်အောင် ဖော်ဆောင်ပေးမည်။
(ဇ) တောင်သူလယ်သမားရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ။ ထောင်သူလယ်သမားများ၏ လူမူစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မည်။ " လယ်လုပ်သူ လယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်"ကို အာမခံမည်။
( ဈ) အလုပ်သမားရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ။ အလုပ်သမားများ၏ လူမူစီးပွားဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မည်။ အခြေခံ ဥပဒေနှင့်အညီ အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်ရေးများကို အပြည့်အဝ ရရှိခံစားနိုင်အောင် ဖော်ဆောင်ပေးမည်။
(ည) ဘာသာရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ။ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ကို အာမခံမည်။
( ဋ) ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မူဝါဒ။ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကို အခြေခံပြီး ညှိနှိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်။
(ဌ) ပညာရေးမူဝါဒ။ ပညာရေးကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ မြင့်မားအောင် ဆောင်ရွက်မည်။ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး အားပေးမြှင့်တင် ဆောင်ရွက်မည်။
( ဍ) ကျန်းမာရေး မူဝါဒ။ တစ်မျိုးသားလုံး သက်ရှည် ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မည်။
( ဎ) ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ။ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု စရိုက်လက္ခဏာများ မပျောက်ပျက်ဆောင် ထိန်းသိမ်း မြှင့်တင်သွားမည်။
ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးသန်းဌေး
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ(၁) - ဦးခင်ရီ (ရဲချုပ်ဟောင်း)
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၂) -
အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး - ဦးသက်နိုင်ဝင်း (အငြိမ်းစား ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး နှင့် အငြိမ်းစား နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး)
ပါတီဗဟိုကော်မတီဝင် - ဒေါ်ကျော့ယဉ်ဝင်း
ပါတီပြောရေးဆိုခွင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ - ဒေါ်နန်းမြမြမီမီဇော်, ဒေါ်ယဉ်မင်းမြင့်ဆွေ(တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ), ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်
↑ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဒုတိယအကြိမ် ပါတီညီလာခံတွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးသန်းဌေးအား ရွေးချယ်။ Eleven News။ ၂၄ ဩဂုတ် ၂၀၁၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
↑ Union Solidarity Development Association/ Party။ Mizzima News။ 25 October 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Haynes, Jeffrey (2019). The Routledge Handbook to Religion and Political Parties. Routledge
↑ ၇.၀ ၇.၁ https://myanmar-now.org/mm/news/415
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်_ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ&oldid=722242" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။